Apaydın: Ankara İzmir Khadka Tareenka Xawaaraha Sare wuxuu furi doonaa 2020 | RayHaber | raillynews
HomeTURKEYGobolka Central Anatolia06 AnkaraApaydın: Ankara Xerada Isgoyska Xawaaraha Sare ee Xawaaladda ayaa furan doonta 2020
Apaydın: Ankara Xerada Isgoyska Xawaaraha Sare ee Xawaaladda ayaa furan doonta 2020
15 / 06 / 2017 06 Ankara, 35 Izmir, tareenka, GUUD, Tareenka dhakhso ah, Headline, TURKEY
Maareeyaha Guud ee TCDD İsa Apaydın, 13 Juun 2017 Talaado TCDD 3. Waxa uu ka qaybgalay casho sharaf ah oo uu abaabulay Agaasimaha Gobolka ee Xarumaha Waxbarashada iyo Madadaalada.
Cuntada Aftar Agaasimaha Agaasimaha Guud Ismail Hakkı MURTAZAOĞLU, Madaxa Waaxda, Madaxa Waaxda, TCDD 3. Agaasimaha Gobolka, Wakiilada NGO-yada, shaqaalaha hawl-gabka iyo shaqaalaha shaqeeya ayaa ka soo qayb galay barnaamijka iftiinka, TCDD 3. Maamulaha Gobolka Selim KOÇBAY wuxuu ku bilaabmay "hadal soo dhaweyn ah AY".
Kadib Maareeyaha Guud İsa Apaydın Hadalkiisa, gaar ahaan bisha Ramadaan, waxay isbeddel ku sameeyeen Agaasimaha Gobolka waxaana la kulmay shaqaalaha degmada. Kadib markii Malatya, Adana iyo Afyon, ay sheegeen in ay ku faraxsan yihiin in ay la kulmaan shaqaalaha İzmir oo ay tiri:
AR WAXAAN LAHAYNAA LACAGTA DIBADDA LACAGTA LOOGU TALAGALAY "
1856 bilaabay abaabul tareenka la gaar muddo Gazi Mustafa Kemal Ataturk hawlgallada tareenka oo xusaya in galeen muddada fadhiidka ah tan iyo sanadkii la soo xnumx'l APAYDIN, "tareennada la taageero muhiim ah siiyey by our dowladda tan iyo 1950 sano mar kale noqday siyaasadda gobolka. Ilaa hadda aannu maal-tareenka halkii 2003 billion. Waxaan sameeyey km 60 of line tareenka cusub. tareenka-xawaaraha sare ee u dhexeeya Kuwani Ankara iyo Konya waa qayb muhiim ah oo ka mid ah line-Eskisehir Istanbul, iyo mar aan ka helnay ganacsiga bilaabay. Our ISLETMECILIGI la danta guud u daran iyo walaac jeesan sii, "ayuu yiri.
"Waxaan cusboonaysiinay 10.000 KM LINE"
Total 3.010 signal line km, line km 2.228 haddii ay sameeyaan APAYDIN ​​ku nuuxnuuxsaday, korontada, "Mar kale, gobollada, waxaan soo cusboonaaday line of 10 kun km our leh kaalin aad u weyn oo allabari. Haddana dhismaha line km 3.935 hadda sii. Waxay ahayd in aan kula awoodaan. Waxaan rajaynayaa in aad taageero in laynka ku xiga, waxaana gaari doonaa caga our la 2023 kaalin, "ayuu yiri.
"WARBIXINTA ANKARA-IZMIR FASTEENKA LAGU HELI KARO 2020"
Afyon, Usak, Manisa, Izmir iyo Menemen line ka jihada shaqada ay la socdaan saaxiibada ayaa xusay in duubista APAYDIN, yiri:
Iz Waxaan rajeyneynaa inaan si dhaqsi ah ugu soo qaadano Izmir sida ugu dhakhsaha badan. Xidhiidhka Ankara iyo Izmir ayaa lagu furi doonaa 2020 iyo 3.5 ayaa waqtigaan ku jiri doona. Sidaa darteed, labadaba Ankara iyo qaybo muhim ah oo ka mid ah waddankeena ayaa la sii wadi doonaa waqti gaaban. Maalgelin muhiim ah ayaa laga sameeyey gobolka Izmir. Farsameynta iyo shaqooyinka calaamadeynta waxay ku sii socdaan line 8.000 km our Approach
"In ka 2023 25 kun oo KM NEW YEAR inaan NETWORK JIDKA"
In 2003 77 ka 2016 million in gaadiidka rakaabka ay gaartay 116 million APAYDIN ​​sheegaysa, "Waxaan dhahnaa 2003 ka 15.9 million tons of xamuulka ee sanadka soo socda ee 26 million tons. Marka aad la dhismaha shaqada iyo dadaalka natiijooyinka shaqeeyaan, tiradaasi noqon doonaa inta ka sareeya. Waxaan rajeyneynaa in aannu yeelan doono cusub ee 2023 25.000 network km wadada. Si wadajir ah waxaan this wada gaari doonaan "
Edirne-Istanbul Xawaaraha Sare ee Xawaaraha waxaa lagu furi doonaa 2020
Mashruuca tareenada ee shiinaha ee Shiinaha oo lagu dhammeeyo 2020
Apaydin, Baaritaanka YHT ee Ankara-Izmir
Apaydın wuxuu baaray Konya-Karaman-Ulukışla Tareenka Xawaaraha Sare
Apaydin, Line-Train Speed ​​Speed ​​Line-Adana-Mersin
Apaydın Baaritaanka Banaz-Eşme High Speed ​​Line
Xarumaha Waxbarashada iyo Madadaalada Urla